‘रोज’ बाट प्रताप दासको सिन काटियो ! « Ramailo छ
‘रोज’ बाट प्रताप दासको सिन काटियो !
नेपाल आइडलका सेकेण्ड रनरअप प्रताप दासको स्वर नेपाली सुगम संगीतमा विस्तारै गुञ्जिदै छ । आइडल सकिए लगत्तै प्रतापद्वारा स्वरवद्ध फिल्म ‘लिलिबिली’को ‘इज इट लभ’ बोलको गीतले राम्रै चर्चा पाएको थियो । लिलिबिली पछि प्रतापले गाएको रोज फिल्मले गीतले चर्चा पाउँदैछ ।
फिल्म ‘रोज’ मा समावेश ‘फूल हैन’ बोल लिएर प्रताप यतिबेला मोफसल टुरमा निस्किएका छन् । उनीसँगै फिल्मका नायक प्रदीप खड्का, दुई नायिका मिरुना मगर र पारमिता राज्यलक्ष्मी राणा कन्सर्टमा सहभागी छन् । रोजको कन्सर्टमा सहभागी भएका प्रतापको कतै भदौ २२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्ममा अभिनय त छैन ? आइतबार इटहरीमा आयोजित प्रेसमिटमा सञ्चारकर्मीले उनलाई प्रश्न गरे ।
सञ्चारकर्मीको यस प्रकारको प्रश्नमा प्रताप केहिबेर रोकिए । उत्तर दिनुअघि छेउमै रहेका नायक प्रदीप खड्का तर्फ हेर्दै ‘सुटिङ भएको थियो तर मेरो सिनमात्र काटियो’ भन्ने जवाफ दिए र मुसुक्क हाँसे । तर उनले रोज मा आफ्नो अभिनय नरहेको प्रष्ट्याए । यद्पी राम्रो फिल्ममा कामगर्ने इच्छा रहेको प्रतापले खुलाए । ‘यदि राम्रो फिल्मका लागी अफर आउँछ भने म गर्न तयार छु, किनकी मलाई पहिले देखी फिल्ममा अभिनय गर्ने इच्छा छ’, प्रतापले भने । गीत हेर्नुस् :
कार्यक्रममा नायक प्रदीप खड्का र नायिका मिरुना मगरले ‘रोज’को बिषयमा जानकारी गराए । आइतबार इटहरी र धरानको कन्सर्ट सकेलगत्तै सोमबार टिम झापा पुगेको छ । झापामा दमक र बिर्तामोडमा कन्सर्ट गरे लगत्तै टिम काठमाडौं फर्किनेछ । काठमाडौंमा पनि दुई ठाउँमा कन्सर्ट गरिने निर्माण नियन्त्रक बुद्धलालले जानकारी दिए । उद्धव पौडेल प्रस्तुतकर्ता रहेको रोज लाई निरक पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् ।